Global Voices teny Malagasy · 30 Janoary 2011
30 Janoary 2011
Tantara tamin'ny 30 Janoary 2011
Ny 28 Janoary, rehefa nitondra fanamarihana mikasika ny toe-draharaha ara-politika any Ejipta ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Sinoa dia niteny fa hitohy hanohana ny governemanta Ejiptiana amin'ny fihazonana ny lamina ara-tsosialy ny governemanta Sinoa ary manohitra ny fijabahan'ny vahiny any Ejipta. Nanomboka teo, ny teny hoe “Ejipta” dia voasakana any...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Janoary 2011
Polonina: Mpamaham-bolongana voampanga fa nitsikera nataony ny Ben'ny tanàna iray
Eoropa Afovoany & Atsinanana30 Janoary 2011
Nanoratra momba an'i Łukasz Kaprowicz mpanao gazety sady mpamaham-bolongana Poloney nomelohina ho nanao fanaratsiana noho ny tsikera nataony tamin'ny Ben'ny tanànan'i Mosina tao amin'ny bolongany i Jakub Górnicki.
Maraoka: Fitsidihana manokana ataon'ny mpanjaka any Frantsam
Tselatra · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Janoary 2011
Araka ny voalazan'ny mpanao gazety Maraokana mpanohitra iray nifampitafa tamin'ny vohikalam-pampahalalam-baovao Frantsay Rue89 [fr] dia toa tonga nanao fitsidihana manokana (visite privée) any Frantsa nanomboka ny alakamisy teo ny mpanjaka Mohamed VI avy any Maraoka, ary mipetraka ao amin'ny Lapaben'ny fianakaviany izay akaiky an'i Parisy. Miteraka tombatombana isan-karazany amin'izay tena...
Voasakana ny vohikala Blogspot any Kambodza
Azia Atsinanana30 Janoary 2011
Nosakanana ireo vohikala Blogspot tany Cambodge rehefa nibaiko mpamatsy aterineto maro ny fitondràna hanakana ny blaogy malaza mpanohitra ny fanjakàna, KI Media. Efa "tsy voasakana" intsony ireo vohikala nefa matahotra ireo mpampiasa aterineto momba ity sivana aterineto tsy nanam-paharoa tany amin'ny firenena ity.
Tontolo Arabo: Fankasitrahana ho an'ny “Arabs Got Talents”!
Ny fihatombohan'ny Arabs Got Talents ao amin'ny fahitalavitra dia nitaona ireo tsikera mampiseho fifaliana sy fanakianana tao amin'ny Twitter, ary vetivety izany dia lasa foto-kevitra iadian-kevitra. Ireto misy fijery sasany nafangaro.